Bookoo Xaraam oo 13 ku dishay Nigeria - BBC Somali
Bookoo Xaraam oo 13 ku dishay Nigeria
30 Maajo 2015
Image caption Bookoo Xaraam Baasuukeyaal ayay guryo ku weerareen
Ciidammada Nigeria ayaa iska caabiyay weerar ay xalay xooggaga Boko Xaraam kusoo qaadeen magaalada ku taalla Waqooyi Bari dalkaasi ee Maiduguri.
Xooggaga Boko Xaraam ayaa baasuukayaal ku dhuftay guryo ku yaalla magaalada, iyaga oo halkaa ku dilay dad ka badan 13 qof ka hor inta aanay ciidammada iska caabin.
Weerarkan ayaa kusoo beegmaya maalin kaddib markii madaxweynaha cusub ee Nigeria Muhammadu Buhari xilka loo dhaariyay.
Buhari ayaa ballan qaaday in uu gacan adag ku qaban doono Boko Xaraam, oo uu ku tilmaamay urur aan Alle aqoon.
Waxa uu ku dhawaaqay in taliska ciidammada loo wareejin doono Maiduguri.
Sanadihii u dambeeyay Bookoo Xaraam waxa ay dileen kumanaan dad ah, inta badana waxa uu dilkaasi ka dhacay gobolka waqooyi bari ee Nigeria, waxa ay isku dayayaan in ay halkaasi ka dhisaan xukuumad Islaami ah.
Wariyaha BBC-da Will Ross oo Abuja ku sugan waxa uu leeyahay waxa ay u muuqataa in Bookoo Xaraam ay weerarkan uga golleedahay in ay muujiso in ay wali halistahay, inkasta oo dhawaanahan lagu qaadayay guluf colaadeed.